Xildhibaan sheegay in halis loogu jiro in la doorto Madaxweyne Shabaab ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyaha guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Siraaji ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in doorashada soo socota Baarlamaanka ay kazoo buuxsamaan Xildhibaano Shabaab ah.
Waxaa uu sheegay in doorashada Xildhibaannada hadii dibn loogu laabto tii Ertgooyinka ay suurtagal tahay in Al-Shabaab Xildhibaano badan ku yeeshaan Baarlamaanka,isla markaana Xildhibaannada ay doortaan Madaxweyne Al-Shabaab ah.
“Haddii lagu laabto doorashadii ergooyinka ee dhacday 2016 ay suuragal tahay in la doorto Xildhibaanno AL-shabaab ah, ama ay Xildhibaannada doortaan Madaxweyne raacsan AL-shabaab ayuu yiri”Xildhibaan Siraaji.
Maxamuud Cabdullahi Sheekh Siraaji ayaa ka digay in doorashada ergooyinka lagu laabto,waxaana uu soo jeediyay in la qaato doorashada qof iyo cod.
Waxaa uu ku dooday in la beddelo nidaamkii hore isaga oo shaki ka muujiyay ergooyinkii ay u yeereen AL-shabaab oo uu sheegay in qorshaha doorashada qeyb ka noqon karaan Al-shabaab.